Star Wars Battlefront II ရဲ့ campaign movie – REDPlayer
မနေ့က official release အဖြစ်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Star Wars Battlefront II ကို ကောင်းကောင်းဆော့ ထားပြီးတဲ့ player တွေရှိနေပြီဆိုယုံနိုင်မလား၊ ဟုတ်ပါတယ်. ဒီဂိမ်းရဲ့ early trial ဆော့ခွင့်ပေးထားခဲ့တဲ့အတွက် တစ်ချို့ Player တွေက cutscene တွေနဲ့ 1နာရီကျော်ကြာတဲ့ movie တစ်ခု Create လုပ်ထားပြီးပါပြီ။
Developer ဖြစ်တဲ့ DICE အနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိမှာ သူ့ရဲ့ ငွေရှာနည်းဖြစ်တဲ့ microtransition တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်ဖြုတ်ချထားရတဲ့အထိ ပြသနာတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့ အတွက်ကတော့ enjoying the game နဲ့ microtransaction တစ်ခုချင်းစီလို့မြင်ထားကြည့်ရအောင်။ လက်ရှိ အချိန်ရရင်တော့ ဒီမှာတင်ပေးထားတဲ့ campaign movie ကိုကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Force Awaken နဲ့ The last jedi ကဇာတ်ကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – first order ဘယ်ကစလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ လာမယ့် Last Jedi ရဲ့ ဟိုတစ်စဒီတစ်စ လေးတွေရောပေါ့။
Star Wars Battlefron II ကို PC အပြင် PS4, Xbox One မှာပါကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မနကေ့ official release အဖွဈထှကျရှိလာခဲ့တဲ့ Star Wars Battlefront II ကို ကောငျးကောငျးဆော့ ထားပွီးတဲ့ player တှရှေိနပွေီဆိုယုံနိုငျမလား၊ ဟုတျပါတယျ. ဒီဂိမျးရဲ့ early trial ဆော့ခှငျ့ပေးထားခဲ့တဲ့အတှကျ တဈခြို့ Player တှကေ cutscene တှနေဲ့ 1နာရီကြျောကွာတဲ့ movie တဈခု Create လုပျထားပွီးပါပွီ။
Developer ဖွဈတဲ့ DICE အနနေဲ့ကတော့ လကျရှိမှာ သူ့ရဲ့ ငှရှောနညျးဖွဈတဲ့ microtransition တှနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွနျဖွုတျခထြားရတဲ့အထိ ပွသနာတှရေငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကြှနျတော့ အတှကျကတော့ enjoying the game နဲ့ microtransaction တဈခုခငျြးစီလို့မွငျထားကွညျ့ရအောငျ။ လကျရှိ အခြိနျရရငျတော့ ဒီမှာတငျပေးထားတဲ့ campaign movie ကိုကွညျ့လို့ရနိုငျပါတယျ။ အမှနျကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျဖွဈတဲ့ Force Awaken နဲ့ The last jedi ကဇာတျကွောငျးတှဖွေဈပါတယျ။ ဥပမာ – first order ဘယျကစလဲဆိုတဲ့ ကိစ်စတှတေော့တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ လာမယျ့ Last Jedi ရဲ့ ဟိုတဈစဒီတဈစ လေးတှရေောပေါ့။
Star Wars Battlefron II ကို PC အပွငျ PS4, Xbox One မှာပါကစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Tags gamemovie pc ps4 starwars xbox one